Forex Trading ၏ဂဏန်းတွက်စက်များ | margin, Pip, မဏ္ဍိုင်နှင့်ရာထူး Calculator ကို
ပင်မစာမျက်နှာ / ထရေးဒင်း / Forex Tools များ / Forex ဂဏန်းတွက်စက်များ
Forex တွက်ချက်မှု range
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သည်တွေ '' စွမ်းဆောင်ရည်ကူညီကြလိမ့်မည်သည့်ဂဏန်းတွက်စက်၏တစ်မူထူးခြားသောအကွာအဝေးဖွံ့ဖြိုးပါဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းဂရုတစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ရှေ့တန်းမှမှာကုန်သည်များ '' လိုအပ်ချက်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါ။ ဒီစုဆောင်းမှုအတွင်းဖြစ်ပါသည်: အနေအထားအရွယ်အစားဂဏန်းတွက်စက်, margin ဂဏန်းတွက်စက်, ဂဏန်းပေါင်းစက်, မဏ္ဍိုင်ဂဏန်းတွက်စက်နှင့်ငွေကြေးဂဏန်းတွက်စက် pips ။ ဒါဟာသူတို့ကအစီအစဉ်၏ရှေ့တန်းမှမှာအန္တရာယ်နှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူတစ်ကုန်သွယ်အစီအစဉ်နှင့်မဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကူညီနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကုန်သည်များသည်ဤဂဏန်းတွက်စက်၏အတော်ကြာနှင့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြောင်းအရေးကြီးသောပါပဲ။ ဤရွေ့ကားဂဏန်းတွက်စက်ကိုလည်းဥပမာအားဖြင့်, အခြေခံအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်ကုန်သည်များကိုကူညီနိုငျ; ကိုယ့်တဦးတည်းဒဿမအမှတ်အားဖြင့်အနေအထားကိုဆိုက်တွက်ချက်မှုတွေမှားယွင်းနေပြီးသိသိသာသာကုန်သွယ်မှုနှုန်းအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။
မဆိုပေးထားကုန်သွယ်ရေးနှင့်သင်၏စျေးကွက်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်ဖို့တစ်ခုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော tool ကို, ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုသင်အထူးသငျသညျဈေးသို့ကုန်သွယ်မှုနေရာနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ယင်းအနားသတ်တွက်ချက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ငွေကြေး Pair ကို
ကုန်သွယ်ရေး Size ကို
နမူနာ: သင် 1.04275 ၏သြဇာသုံးပြီး 10,000 * တစ်ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားမှာ 1 ၏ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား. စျေးနှုန်းမှာ, ငွေကြေးတစ်စုံ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်: 200 ထို့နောက်သင်ဖုံးလွှမ်းရန်သင့်အကောင့်အတွက် $ 52.14 ဒေါ်လာရှိသည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ထိတွေ့။
* တဦးတည်းအများကြီး 100,000 ယူနစ်ညီမျှ။
ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ tool ကိုကုန်သွယ်မှုနှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ pips တွက်ချက်အတွက်ကုန်သည်များ, အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များ, ကူညီပါလိမ့်မယ်။
Value ကို PIP
နမူနာကျနော်တို့ကိုတဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာဥပမာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်; သငျသညျ 1.04275 တစ်ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားမှာ 10,000 ၏ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား. စျေးနှုန်းမှာအဓိကငွေကြေးတစ်စုံ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်လျှင်, တ PIP ညီမျှပါတယ်။ ထိုကြောင့်သင်သည်အချက်တစ်ခု PIP ဒီလောက်စွန့်ပါတယ်။
ဒီ tool ကိုကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိကျသောမဏ္ဍိုင်ရမှတ်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူအတော်များများကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအလိုအလြောကျ, နေ့စဉ်မဏ္ဍိုင်ရမှတ်တွက်ချက်တော်မူမည် နေ့စဉ်မဏ္ဍိုင်အမှတ်, ခုခံနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်ဆင့်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာ input ကိုယခင်နေ့ကဖွင့်မြင့်မားတဲ့, အနိမ့်နှင့်မဆိုပေးထားသောလုံခြုံရေးများအတွက်ပိတ်ပွဲစျေးနှုန်း။ အဆိုပါဂဏန်းတွက်စက်ထို့နောက်အလိုအလျောက်အမျိုးမျိုးသောမဏ္ဍိုင်အချက်များဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ , entry ကိုရပ်လိုက်နှင့်အမြတ်အစွန်းကန့်သတ်အမိန့်ယူ: ဤသော့ချက်ဒေသများအများအပြားကုန်သည်များဖြစ်ကောင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌မိမိတို့နေရာချပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအရေးပါသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။
အတွေ့အကြုံရှိ, ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များအတွက်နောက်ထပ်အရေးပါသောအ tool ကို, ဒီဂဏန်းပေါင်းစက်ကုန်သွယ်မှုနှုန်းသင့်ရဲ့အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဈေးကွက်သို့သင့်ရဲ့အလုံးစုံထိတွေ့မှုစောင့်ကြည့်ဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ရာထူး Size ကို
နမူနာ: ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးကို pair တစုံကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်သာအန္တရာယ်မှကုန်သွယ်မှုနှုန်းသင့်အကောင့်၏ 1% ချင်တယ်။ သင်သာ 25 pips ဝေးလက်ရှိစျေးနှုန်းမှသင်၏မှတ်တိုင်ရှိချင်တယ်။ သို့ဖြစ်. သင်သည်နှစ်ခုစာရေးတစ်ဦးအနေအထားအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုပြီးပါလိမ့်မယ်, $ 50,000 ၏အကောင့်တစ်ခုအရွယ်အစားရှိသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သင်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ် $ 500 ဒီလောက်စွန့်ပါလိမ့်မယ်, သင့်ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုကဤသည်သင်၏အရှုံးဖြစ်လိမ့်မည် activated ရပါမည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်မျှမတို့သံသယကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ် tool များ၏အများဆုံးအကျွမ်းတဝင်, ငွေကြေး Convertor ကုန်သည်များဖြစ်ကောင်းအခြားငွေကြေးသို့၎င်းတို့၏ပြည်တွင်းငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။
နမူနာ: သင် $ 10,000 မှ€ 10,000 ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ရလဒ် 10,437.21USD ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံကြောင်း 1 EUR = 1.04372 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာတွင် = 0.958111 EUR ။
ဤရွေ့ကားဂဏန်းတွက်စက် FXCC အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူဘို့ငါတို့ကုန်သည်ကြီးများ Hub ကနေတစ်ဆင့်သုံးစွဲနိုင်ကြသည်။